Maleeshiyaadka Oromada oo shacab ku laayey tuulada DAARIMI ee TULI GUULEED – Radio Daljir
Maleeshiyaadka Oromada oo shacab ku laayey tuulada DAARIMI ee TULI GUULEED
Maarso 25, 2020 8:17 g 0
Dablay hubaysan oo ka soo tallaabtay dhanka magalaada Jinacsani ayaa waxa ay maanta weerar hubeysan ku soo qaadeen tuulada DAARIMI ee degmada Tuli Guuleed.
Degmooyinka Jinacsani iyo Baabili ayaa waxaa Soomaalida lagala wareegay 14 sano kahor oo hadda waa deegaan Oromo, waxaana si toos ah Oromada ugu wareejiyey Madaxweynihii xilligaas ee Kililka Soomaalida Madaxweyne Cabdi Jibril.
Weerarka Oramadu ay maanta soo qaadeen ayey waxa ay ku dileen hooyo Soomaaliyeed, magaceedana lagu sheegay MALYUUN AWMUUSE, waxaana lagu dhaawacay wiil dhallinyaro ah oo asna magaciisa lagu soo koobay ISMAACIIL YUUSUF.
Maleeshiyaadka Oromiya oo hore la isaga difaacay dhowr weerar oo ay soo qaadeen ayaa maalmahan dambe si joogto ah u soo rogaalcelinayey, ayaga oo qorshahoodu yahay in weerarada lagu barakiciyo shacabka degmada Tuli Guuleed oo hore looga barakiciyey, lagalana wareegay qabalo (tuulooyin) hoostaga degmadaTuli Guuleed.
Tuliguuleed ayaa magaalo madaxda Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) ee Jigjiga u jirta 30 KM, dhanka galbeedkana waxaa ka xiga Jinacsani oo kal hore Oramadu kala wareegeen Soomaalida, waana magaalo beeraley ah, kana mid ah magalooyinka ugu waxsoosaarka badan DDS. Laakiin Tuli Guuleed waxaa dhowrkii sano ee ugu danbeeyey weerar ku ahaa maleeshiyaadka Oramada, ayada oo dad badan ku naf waayeen, kuwo badanna laga qaxiyey badanaa qabalada ama degmooyinka hoostaga Tuliguuleed.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 212 Wararka 20365
Madaxweynaha DDS Mustafe Cagjar oo ka hadlay khatarta cudurka Caronavirus (Daawo)